Lifestyle | Yangon Thu Michelle
Naga is unique ethnic people living along in Myanmar and India border line. January 14 to 16 is their new year day and also…
Heineken: Star Collective မှာ ပျော်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကြိုက်တဲ့ မေရီရဲ့ သီချင်းတွေနားထောင်ရတာ မှတ်မှတ်ရရ … ❤️ ချစ်တဲ့ ရန်ကုန်သူမီရှဲ #heinekenfestivemm…
ပွဲတက်ရာသီ ဘွဲ့ယူရာသီရောက်နေပြီဆိုတော့ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့လိုက်တဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ရှာရပြီဟုတ်။ မီရှဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိ၊ စုံစမ်းမေးမြန်းထားတဲ့ ပြည်တွင်းဖြစ်လက်ကိုင်အိတ်တွေ ရှာရလွယ်အောင် စုပေးလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်သူမီရှဲရောင်းတာမဟုတ်သလို အလကားလဲမရပါဘူး။ မေတလက်ဆောင် ရတာလည်း မရှိပါဘူး။ ပွဲတက်ဖို့လိုတဲ့အချိန်ဆို လက်ကိုင်အိတ်ရှာဝယ်ရတာ ခေါင်းစားလို့ ကြိုက်တဲ့အိတ်ဆိုင်တွေမှတ်ထားတာ။ အလွယ်တကူဝင်ကြည့်လို့ရအောင် ပေ့ချ်နာမည်နဲ့တူတူ ပြောပြထားတယ်။ ပုံတွေကတော့ ပေ့ချ်တွေကနေပဲ…
Sony camera ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်မှတစ်ခါကျင်းပတဲ့ Sony Alpha Festival မှာ ပရိုမိုးရှင်းတွေ အကြီးအကျယ်ချနေပါပြီ။ ၃ရက်နေ့ကနေ ၅ရက်နေ့အထိပဲတဲ့ လာခဲ့ကြနော် မှ ချစ်ရတဲ့ ရန်ကုန်သူမီရှဲ #yangonthumichelle #michellemayshell #lifestyleblogger #sony #sonymyanmar #sonyxyangonthumichelle #a6400…
သို့ ချစ်ရပါသောမိတ်ဆွေ မနက်ဖြန် Sony နဲ့အတူ Junction City မှာ ညနေသုံးနာရီဆိုရင် နာမည်ကျော်ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအကြောင်း ကင်မရာတွေအကြောင်း ပြောကြမယ်။ Sony camera ကိုဝယ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက် ပရိုမိုးရှင်းတွေရှိမယ်။ ဓာတ်ပုံကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် မေးမြန်းလို့ရအောင် ဆရာတွေ တစုတစည်းတည်းရှိမယ်။ ခရီးသွားတာကို စိတ်ဝင်စားရင်တော့…
Millenniums’s Travel Partner! #sony #a6400 #sonyxyangonthumichelle #istanbul #hagiasophia #touristattraction
မင်းသမီးတွေ ဒေါက်ဖိနပ်လှလှလေးစီးထားရင် အားကျရတယ်ဟုတ်။ ကိုယ်တိုင်စီးတဲ့အချိန်ကျတော့ ခြေညိုးတွေနာ ဖနှောင့်တွေပေါက် ညောင်းကလဲညောင်းသေး။ တခြားကောင်မလေးစီးတာကျတော့ ကြည့်ကောင်းလိုက်တာ။ မီရှဲက ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရင် အနည်းဆုံး ဒေါက်ဖိနပ်ကို ၂နာရီထက်မနဲစီးရတယ်။ ထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲ မတ်တပ်ရပ်ရင်ရပ်။ မရပ်ရင် လျှောက်သွားနေရတာ။ အဲ့ဒီတော့ ကြာကြာစီးရင်လည်း အဆင်ပြေ၊ သက်တောင့်သက်သာလဲရှိအောင် ဘယ်လိုစီးလဲ ရန်ကုန်သူမီရှဲနဲ့…
ကျွန်တော့်မှာ သတ္တိများများစားစား မရှိလှပါဘူး သုခမိန်လှိုင် – နှင်းဆီပန်းများနှင့်လက်ထပ်ရခြင်း ချစ်တဲ့ ရန်ကုန်သူမီရှဲ #yangonthumichelle #michellemayshell #lifestyleblogger #poem #သုခမိန်လှိုင် #love
အနုပညာဆိုတာ နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ မွမ်းကြပ်မှုအတွက် လွတ်မြောက်ရာပါ။ အထူးသဖြင့် ပန်းချီကားတွေပေါ့။ Leonado DaVinci ရဲ့ replica ပုံတွေကိုကြည့်ရတာတောင် ဒီလောက်ရင်ခုန်စရာကောင်းနေရင် အစစ်သာဆို ထအော်မိမလားပဲ … ချစ်တဲ့ ရန်ကုန်သူမီရှဲ #yangonthumichelle #michellemayshell #lifestyleblogger